Wararka - Kaabis Dhamaystiran - Sunfood Chlorella
Unugyada La-Cuntada ee Sunfood (SCCs) waa mid cusub oo xiiso leh, beddel aan sun ahayn oo lagu beddelo qashin-qubka, la warshadeeyay, iyo sunta unugyada.chlorella qorraxdaCHLORELLA Lifaaqa Chlorella, oo sidoo kale loo yaqaan Chlorella iyo Chlorex, waa antioxidant kacaan oo dhinacyo badan leh oo ka kooban amino acids iyo nafaqooyin kale oo unugyo hodan ah oo laga soo goostay Qorraxda. Chlorella waa biyo-milmi kara, kaabis oksijiin hodan ku ah Fitamiin A, Bir, iyo walxo kale oo raad raaca oo hagaajiya shaqada guud ee unugyada iyo dheef-shiid kiimikaadka. Chlorellate (ama Chlorophyll) waa mid aad u xulasho leh, biyo milmi kara, dareere dabiici ah oo si isku mid ah ula shaqeeya asiidh dufan oo lagama maarmaan ah iyo asiidhyo amino si kor loogu qaado gaadiidka gacanta ee waxtarka leh, wax soo saarka tamarta, iyo adeegsiga. Unugyada Cuntada ee Sunfood waxay caafimaadkaaga ku kobciyaan nafaqo siiya caafimaad sare.
Markaan sii gabowno, jidhkeenu wuxuu soo saaraa wax yar oo ah phytonutrients (micro-organisms micro) oo naga ilaaliya burburka deegaanka, hagaajiya muuqaalka maqaarka iyo difaaca, iyo ilaalinta caafimaadka ugu fiican.chlorella qorraxda chlorella qorraxdaMarkay timaaddo dheellitirka waayeelka, mid baa isweydiinaya waxa ka fiicnaan kara dabiici, sonkor badan, dufan yar, cadka sare, badeecad lacag la'aan ah oo phytonutrient ah oo ay ka buuxaan nafaqooyin anti-gabowga ah. Chlorellate waa awood badan, shaqooyin badan leh, antioxidant dheeri nafaqo badan leh. Soo-saarkan hodanka ah ee hodanka ah ee hodanka ah ee Sunfood Unugyada Caqabadaha leh wuxuu kor u qaadaa shaqada unugyada wuxuuna kor u qaadaa wareegga; waxay u shaqaysaa sidii ilaaliye mindhicir waxayna kor u qaadaa miisaanka. Intaa waxaa dheer, Chlorellate waxay caawisaa baabi'inta sunta iyo caawinta bogsashada nabarka. Chlorellate Sunfood waa gargaar nafaqo oo xoog leh oo taageera qaar badan oo ka mid ah waxyaabaha ugu waaweyn ee gabowga caafimaadka leh, sida yareynta bararka, heerarka tamarta oo weyn, iyo yareynta halista cudurka iyo gabowga.
Chlorellate waa isku-darka soosaarayaal badan oo dhir ah oo ay ku jiraan laakiin aan ku xaddidnayn Sunfood Unugyada Caqabadaha leh, Tri-Glycosylated Glucosamine, L-Cysteine, N-acetylneuramic acid (N-Acetyl Cysteine), L-Methionine, iyo Bromelain (Bromelain ayaa si guul leh loogu adeegsaday daaweynta cudurka Alzheimers, Cudurka Parkinsons, iyo Multiple Sclerosis).chlorella qorraxda chlorella qorraxdaMaadaama ay chlorella leedahay heer dareere aad u hooseeya, way u fududahay inay ku milmaan dhiiggaaga iyadoon soo gelin mareenka calooshaada. Maadaama chlorella aan lagu burburin karin asiidhka caloosha, waxaa badanaa loo isticmaalaa gargaar dheefshiidka maadaama ay si dhakhso ah ugu dhaqaaqdo mindhicirrada. Kaabis ay ku jirto chlorellate ayaa aad ugu fiican dadka qaba dib -u -celinta aashitada iyo laabjeex, maadaama ay yareyneyso cadadka gaas ee ay caloosha soo saarto oo meesha ka saarto aashitada xad -dhaafka ah ee hunguriga. Sidoo kale, maadaama ay si fudud u dheefshiido, chlorellate si badbaado leh ayaa loogu dari karaa cunto kasta maadaama ay bixiso tiro badan oo ah macdanta cuntada iyo nafaqooyinka jidhkeennu u baahan yahay. Chlorellate sidoo kale waxay bixisaa xaddi badan oo ah potassium, magnesium, kalsiyum, iyo selenium, kuwaas oo dhammaantood muhiim u ah jirka si loogu shaqeeyo si habboon.
Si ka duwan inta badan nafaqada suuqa, Sunfood Chlorella waxay bixisaa isku -darka saxda ah ee nafaqooyinka, antioxidants -ka, iyo nafaqooyinka kale ee muhiimka ah qaab fudud oo la nuugo. Chlorellate waxay gacan ka geysaneysaa buuxinta nafaqooyinka duugoobay ee ku lumay aashitada caloosha ee xad-dhaafka ah, halka N-Acetyl Cysteine ​​ay gacan ka geysato sidii kolestaroolka xad-dhaafka ah looga saari lahaa halbowlayaashaaga. Bromelain waa antioxidant kale oo awood leh. Waxay ka hortagtaa xagjirrada xorta ah ee waxyeellada leh inay waxyeello u geystaan ​​unugyada jirkaaga. Marka lagu daro chlorellate, Bromelain wuxuu awood u leeyahay inuu yareeyo fursadahaaga inaad ku qaaddo noocyo badan oo kansar ah, sida xiidanka, qanjirka 'prostate', naaska, iyo kansarka qanjirka 'prostate'. N-acetylneuramic acid wuxuu kaloo siiyaa faa'iidooyin caafimaad qanjidhada adrenal, beeryarada, kelyaha, beerka, iyo wadnaha.
Sabab kale oo loo adeegsado Sunfood Chlorella miisaan lumis iyo guud ahaan caafimaadka wanaagsan ayaa ah sababta oo ah xooggeeda sare ee antioxidants. Antioksidant -ka ayaa ka caawiya la dagaallanka xagjirnimada xorta ah iyo sunta kale. Antioksidant -yadu waxay u shaqeeyaan labada siyaabood oo kaliya maahan inay la dagaallamaan sunta aan cunno, laakiin waxay sidoo kale ka takhalusaan xagjirrada xorta ah ee la soo saaray iyagoo la kulma xanaaq deegaanka iyo molecules xagjir ah oo lacag la'aan ah. Sababtaas awgeed, Chlorellate waxaa loo tixgeliyaa inay tahay cunsur muhiim u ah ka -hortagga iyo daaweynta waxyeellada xagjirka ah ee bilaashka ah. Ka sokow faa'iidooyinkeeda miisaanka oo yaraada, Chlorellate ayaa la xaqiijiyay inay waxtar u leedahay yareynta astaamaha arthritis, cudurka Alzheimers, sonkorowga, iyo cudurka beerka, iyadoo kordhineysa heerarka tamarta iyo waxqabadka unugyada dhiigga cas. Chlorellate ayaa sidoo kale la muujiyey inay kordhiso soosaarka unugyada lafaha, xoojiso ilkaha, hagaajiso aragga, kordhiso midabka maqaarka, iyo daaweynta xaaladaha maqaarka ee halista ah sida cambaarta, melasma, psoriasis, iyo finanka daran.
In kasta oo ay jiraan noocyo kale oo dheeri ah oo suuqa ku jira oo laga yaabo inay wax u taraan caafimaadkaaga iyo fayoobaantaada, qaadashada Sunfood Chlorella oo ah kabitaan maalinle ah ayaa bixisa ilaha ugu nafaqada badan waxayna si gaar ah waxtar ugu leedahay dadka leh cillado gaar ah. Sababtoo ah waa cunto dhammaystiran, waxay ka kooban tahay dhammaan walxaha nafaqada leh ee lagama maarmaanka u ah caafimaadkaaga. In kasta oo chlorella laga heli karo badeecadaha ganacsiga qaarkood, haddana weli waa isha ugu dhammaystiran ee nafaqooyinka laga heli karo nafaqooyinka maanta. Sababtaas awgeed, Sunfood Chlorella, oo ay ku jiraan dhammaan kaabisyada Sunfood, waa mid ka mid ah kaabayaasha ugu wanaagsan suuqa maanta.
Waqtiga dhejinta: Sep-16-2021